<º Gamers: Ady | Avy amin'ny Linux
<º Gamers: Ady
Izy ireo dia Rohy | | GNU / Linux, Games
amin'ny alalan'ny Rootgamer Fantatro ny momba ny Beta ho an'ny daholobe lalao vaovao ho an'ny GNU / Linux: fifandirana. Ity lalao ity dia tafiditra ao anatin'ny sokajy mitovy amin'ny DOTA sy League of Legends, fa koa ohatrinona amin'ny maody tantara, izay amiko dia ankasitrahana (lalao tsy misy tantara, afa-tsy amin'ny fotoana tsy fahita firy, matetika aho no milalao kely na tsy misy).
Hanana mahery fo isan-karazany azontsika ampiasaina isika, ankoatry ny maro mascotas miaraka amin'ny hery samihafa hanampy antsika mandritra ny lalao. Izy io koa dia misy chat sy efitrano ankapobeny noforonin'ireo mpilalao (na mamorona ny anay). Maimaimpoana ny lalao, fa toy ireo voalaza etsy ambony ireo, ohatrinona amin'ny rafitra fandoavam-bola hahafahana mahazo vatosoa ahazoana entana vaovao.
Ny lohahevitra sary dia tsara raha ny fahitako azy sy ny feon-kira miaraka aminy. Mbola misy zavatra tokony ampiana, toy ny maodely tantara maro hafa, angamba na ny teny Espaniola izay tsy haintsika tsara ny miteny Anglisy, fa mampiala voly amin'ny ankapobeny.
Raha milalao dia mila misoratra anarana amin'ilay rohy eto ambany fotsiny ianao (izay efa manampy anao amin'ny lisitry ny namako) ary misintona ny fonosana mifandraika amin'ny rafitrao.
OS: Windows XP SP3 na avo kokoa, Mac OS X 10.7 na avo kokoa, Linux
Processeur: Intel Dual-core na AMD 2.4 GHz
Fahatsiarovana: RAM 2 GB
Sary: NVIDIA GeForce 8600 na tsara kokoa, ATI / AMD Radeon HD 2600 na tsara kokoa, Intel HD 2000 na tsara kokoa / li>
Fifandraisana: internet malalaka
Hard disk: habaka malalaka 4 GB farafahakeliny
Mandrapihaona amin'ny lalao 😉
Misoratra anarana amin'ny lalao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » <º Gamers: Ady
21 hevitra, avelao ny anao
The Master dia hoy izy:
Mahaliana ny eritreritro fa hampidina azy aho hizaha toetra azy.
Valio Ilay Mpampianatra
Tsara, efa nisoratra anarana .. Ankehitriny dia tsy maintsy misintona 1.5Gb fotsiny aho hahaha
Joshua dia hoy izy:
Ampio aho azafady! Ahoana no hametrahako azy amin'ny Ubuntu 14.04?
Valiny tamin'i Joshua
rawBasic dia hoy izy:
Tsara .. .. andao handeha ho any Moba voalohany .. .. Manantena aho fa tsy ho tara loatra .. 😛
Hitohy mandritra ny fotoana fohy io..Nisoratra anarana aho..fa ny ampitson'iny dia vita rahampitso izay ahazoako miditra amin'ny symmetric 20mb .. xD
Valiny amin'ny rawBasic
xino93 dia hoy izy:
Toa tsara izany, amin'ny MOBA rehetra any, io no tena mitovy amin'ny League of Legends (ankafiziko).
Mamaly an'i xino93
Ho diso fanantenana ianao, toa LoL ihany ny miborosy, raha tsy izany dia misy mekanika haingana kokoa sy samy hafa ... izany no antony lalaoviko azy, halako LoL ary raha nitovy loatra izany dia tsy nilalao xD aho
Efa nakariko fa tsy haiko ny mitantana azy
manamarina izay rehetra hitako fa ao anaty folder bin dia ilay xD azo ampiharina
Tsara. Manantena aho fa misy ny antonony tsara eo amin'ireo mpampiasa (tao amin'ny DOTA 2 dia diso fanantenana aho satria be loatra ny ankizy nifamory).
Mianara tsy miraharaha azy ireo ianao na mikorontana amin'izy ireo mba hahatonga azy ireo handeha na hanao zavatra mba hitateran'ny tsirairay, minoa ahy, mahafinaritra izany rehefa mandeha ny fotoana.
Mahaliana fa mila ilainao tsara kokoa ilay izy. Lalao tsara izany fa mifangaro tsy fahita firy amin'ny LoL be dia be ary pinch of Dota, amin'ny ambaratonga mekanika dia tsy mampiditra be loatra izy io fa eo amin'ny sehatra interface sy ny lalao miaraka amin'ny fampitomboana ny fahaizanao araka ny tetika nomenao sy ny fiara. mividy entana.
Raha tsy maintsy mamoaka criterion momba an'io MOBA io aho dia hiteny hoe tsy misy dikany ary hisy foana izany, namboarina mba tsy hila ekipa iray, mazava ho azy fa nanala mekanika taktika maro mamela hamily ny fitsipiky ny lalao iniana (eny, masiaka xD i Dota), fa andao handeha mahafinaritra indraindray.
Raha milalao Dota ianao ary tsy manana namana mifandray (toy ny ataoko indraindray), aleo mandeha any Strife mandritra ny fotoana fohy, mahatsiravina ny kitikitihan'ny voalavo an-jaza ... amin'izao fotoana izao ao Strife, tsy misy an'izany.
Farafaharatsiny mba nanao ny tsara indrindra vitako aho. Kitiho fotsiny i Dota sy LoL mba tsy ho manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra aho, eny, ity lalao ity dia nahatratra izay tsy ananan'ny 2 hafa: miezaka ny milalao azy aho, nefa mbola mampihatra ihany. Ary tsy haiko, fa manome ahy izany raha nanana zanaka voalavo aho, satria ny helo, izaho dia farany na penultimate amin'ny laharan'ny ekipako amin'ny faran'ny lalao. Indray andro dia tsy maintsy ataontsika eo afovoantsika ny mpampiasa: Admids sy editers mpampiasa VS XD
Manelingelina ahy ny fanomezana ahy "titre" an'ny "Ny sarobidy indrindra amin'ny lalao" raha toa ka resy foana aho satria tsy milalao tsara ny ekipako xD ... manandrana mampitony anao tsara ny tenanao ny lalao hahahahaha
tsy fantatra dia hoy izy:
Somary nilalao azy aho (ampahany amin'ny lesona sy lalao an-tserasera) ary tsara izany. Heveriko fa io no safidy voalohany an'ny Dota 2 amin'ny Linux. Araka ny efa novakiako, ity lalao ity dia tsy dia mifaninana noho ny dota na lol. Ny zavatra sasany tsikaritro dia ny mpilalao tsirairay avy ary samy manana ny mpitondra hafatra avy aminy ary kely kokoa noho ny an'ny dota ny ady (na toa izany ny fahitako azy), ahoana raha tsy maharesy lahatra ahy be dia be ny biby maherin'ny tsirairay. Na izany na tsy izany, tadidio fa mbola ao anaty beta ny lalao
Valiny amin'ny tsy fantatra
Lafor22 dia hoy izy:
Efa nisoratra anarana aho. Andao hojerentsika izao ny fomba ahazoako an'ity karazana lalao ity, izay ho ahy no voalohany amin'ity fomba ity. Avy amin'ny Insurgency sy Arma kokoa aho, saingy efa somary reraka amin'ireo, ka mila manandrana zavatra. Misaotra anao.
Valiny tamin'i Lafor22
Salama, azonao atao ve ny manome lesona hianarana ny fametrahana ny lalao? Izaho dia zazavavikely vao, ahoana no hametrahako azy amin'ny Ubuntu 14.04?
Izy io dia ny misintona, manaisotra ary manindry indroa ny fisian'ny fifandirana ao anaty fampirimana bin
Salama, efa nampidina azy aho ary namaha azy io fa rehefa tanterahiko ilay izy dia tsy milanja tsara ny sary dia miseho ny écran noir ary ny lahatsoratra ihany
Mamaly an'i cristian
Efa nampidina ny lalao aho fa rehefa manomboka azy aho dia tsy milanja tsara ny sary, azonao atao ve ny manampy ahy amin'ny vahaolana
ampidino ny kinova 64-bit ho an'ny linux ary manana fanabeazana fototra aho 😀
Mihazakazaha avy eo amin'ny terminal, mety tsy mahita tranomboky ianao. Rehefa miditra milalao ve ianao sa mahita tsara ny efijery an-trano? Raha izany dia andramo ny manova ny toerana misy ny sary ao amin'ny Safidy (io ilay gearwheel etsy ambony)
Androany zoma ary tolakandro dia tsy miasa aho, ka anio no andramako azy tsara. Manantena aho fa tsy ho ketraka loatra. Lahatsoratra tsara.
Qupzilla: navigateur maivana sy maivana
Porteus: fizarana Linux azo entina mandehandeha (-300 mb)